Esory an-tsaina ny hevitra hanao auto-proclamation, na haka miaramila, vita hatreo ny momba anao raha miditra amin'izany ianao. Ny Malagasy rehetra sy ny CI dia hifanontona aminao avokoa, tsy ho zakanao izay.
Ny fidirana amin'ny 2e tour no omano, ny mpitsara dia olombelona, raha miady mivady izy any an-tranony, dia mamay izay olona tsarainy amin'iny andro iny. Mitsiky izy, dia mitsiky ihany koa ny didiny, na dia manaraka hatrany ny lalàna aza izy.
Aza mi provoque ny HCC fa ratsy be raha donainandreo disqualification eo ianao. Enga anie tsy hisy izany, fa azony atao izany ary betsaka ny argument mety anaovany an'izany.
Tandremo fa ny manodidina hatrany no manimba.
Mirary soa ary soavadia
Photo: Inauguration de l'hôpital Andohatapenaka par Andry Rajoelina mercredi 22 janvier 2014.